Dhoobo-daareed oo xukuumadda Puntland ku cambaareeyay nabadoono lagu xiray Boosaaso – Hornafrik Media Network
Dhoobo-daareed oo xukuumadda Puntland ku cambaareeyay nabadoono lagu xiray Boosaaso
By Liibaan Nuur	 On Dec 1, 2019
Guddoomiyihii hore ee Baarlamanka maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo-daareed) oo ku sugan degmada Xiingalool ee gobolka Sanaag ayaa xukuumadda Madaxweyne Dani ku cambaareeyay xarigga uu sheegay inay kula kacday qaar ka mid ah nabadoonada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Labo Nabaddoon oo lagu kala magacaabo Diraac Yuusuf Buuxe iyo Cawad Maxamed Faarax oo ka mid ahaa waxgaradka gobolka Bari ayaa shalay ciidamada Booliska Puntland ku xireen magaalada Boosaaso.
Labadaas Nabadoon ayaa xukuumadda Puntland ku dhaliilay heshiiska ay shirkadda DP World ay ku maamusho dekedda magaalada Boosaaso iyo sidoo kale heshiisyo cusub oo ay sheegeen inay xukuumaddu ku wareejisay dowladda Imaaraadka Carabta garoonka diyaaradaha Boosaaso iyo xarumo kale.
Guddoomiye Dhoobo-daareed ayaa tilmaamay in qofka muwaadinka ah uu dastuurka Puntland xaq u siinayo inuu ra’yigooda cabiro, wax kasta oo ay xukuumaddu ku qaldantahayna ay si xor ah uga hadli karo, sidaasi darteedna ay sharci-darro tahay in fikirkooda loo xiro labadas nabadoon.
Sidoo kale Cabdixakiin Dhooba-daareed ayaa nasiib darro ku tilmaamay in xukuumadda Puntland ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Dani ay sii wado caburin uu sheegay in lagula kacdo dadka ka dhiidhiya arimaha qaldan, iydoo ay horay u jireen sida uu sheegay ceebo dhacay oo aan xalkooda laga arinsan.
Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed oo horay u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa wixii ka dambeeyey markii ay kalsoonida kala noqdeen baarlamaanka maamulkaas waxa uu ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka Sanaag oo kolkii hore laga soo doortay.
Cabdikariin ayaa horay u sheegay inaysan sharci aheyn xil ka qaadistiisii sidaas darteena uu isaga yahay guddoomiyaha sharciga ah ee baarlamaanka Puntland.
Fiqi: “Shaqadii Gabre la’aantiis ayey dalka ka socotaa”